ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ပါက ငါး၊ ပုစွန် မွေးမြူရေးကန်များ နစ်မြုပ်နိုင်သဖြင့်ကြိ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၁၄-ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဆက် လက်ဖြစ်ပေါ်ပါက ငါး၊ ပုစွန် မွေး မြူရေးကန်များ နစ်မြုပ်နိုင်သဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကြိုတင် ကာကွယ်မှုများကို ပြုလုပ်ထားရန် မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေ သများဖြစ်သော ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန် နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ် တချို့တွင် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာ သွန်းခြင်း၊ထူးကဲဒီရေမြင့်တက် ခြင်းတို့ကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ထပ်မံ၍ ဩဂုတ်လလယ်မှ စက်တင်ဘာလ လယ်အထိ ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သဖြင့် ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးကန်များအနေဖြင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် ဆုံးရှုံး နစ်နာမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုတင် ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“”သဘာဝဘေးအန္တရာယ်က နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့အပေါ်က မိုး ရေတွေများလို့ ပဲခူးတိုင်း၊ ကရင် ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်မှာရေကြီး နစ်မြုပ်သလို အခုလည်းထူးကဲ ဒီရေတက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ်း ရိုးတန်းဒေသတွေမှာ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒါက ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်တဲ့ ငြင်းလို့မရတဲ့ လက္ခ ဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း စိုးရိမ်နေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေက ဇလွန် အပါအဝင် ဓနုဖြူ၊ ညောင် တုန်းဘက်တွေမှာ စိုးရိမ်ရေအမှတ် အထက်ကို ကျော်လွန်ရောက်ရှိပြီး တော့ ရေများနေပါပြီ။ မိုးရာသီက စက်တင်ဘာလအတွင်းအထိဖြစ် တော့ ကျန်ရှိနေတဲ့ တစ်လကျော် ကျော်အတွင်းမှာ အခု မြင့်နေတဲ့ ရေနဲ့နောက်ထပ် ထူးကဲဒီရေတွေ တက်လာမယ်ဆိုရင် အရင်နှစ်က မြုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူး တိုင်းက ငါးကန်ရှိတဲ့ဒေသတွေ စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ နစ်မြုပ်လေ့ ရှိတဲ့ ငါးကန်တွေကို ကန်ဖော် လိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ငါးမထွက် အောင် ကာရံတာတွေ ကြိုလုပ်ဖို့ နှိုးဆော်ထားပါတယ်””ဟု မြန်မာ နိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းကြိုင်က ဩဂုတ် ၁၄ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ် သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်၏ သား၊ ငါးကဏ္ဍဆိုင် ရာ အင်္ဂါအစည်းအဝေးပွဲတွင် ပြောသည်။
ဒေသတွင်း ရေကြီးနစ်မြုပ်မှု များဖြစ်ပေါ်ပါက ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူ ရေးကန်များအနေဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိ စေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ် မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထား ရန် လိုအပ်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အနေဖြင့် တာပေါင်များ ကျိုးပေါက် မှုမရှိစေရန် တာပေါင်များ မြှင့်တင် ခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေးအတွက်သဲ အိတ်ဖို့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ငါးမွေးကန်များ ရေလျှံ၍ ငါးများ လွတ်ထွက်မှုမရှိစေရန် ပိုက်စိပ်များ ဖြင့် ကြိုတင်ကာရံခြင်း၊ အစာဂို ဒေါင်များ ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ကြံ့ ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းများ ကြိုတင်စီမံ ဆောင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးဝင်းကြိုင်က “”ရေကြီးနစ် မြုပ်မှုကြောင့် လယ်ဧက ခုနစ်သိန်း ကျော် ရေနစ်မြုပ်ခဲ့တာမှာ ဧက သုံးသိန်းလောက်က ပျက်စီးခဲ့တယ် လို့ အစိုးရရဲ့စာရင်းအရ သိရတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ပျက်တော့ ပျက်တယ်။ လုံးဝပျက်မယ့် အခြေ အနေတော့မရှိဘူးလို့ သိရတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့ ငါးမွေး မြူရေးလုပ်ငန်းကို သွယ်ဝိုက်ပြီး ထိခိုက်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါ။ ကျွန်တော် တို့က စိုက်ပျိုးရေးကထွက်တဲ့ ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေကို အစာ အဖြစ်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့် လယ် တွေ ပျက်စီးသွားရင် စပါးအထွက် နှုန်းလျော့တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ တိရစ္ဆာန်အစာကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့ ဖွဲနု၊ ဆန်ကွဲတွေ လျော့သွားပြီး ရှားပါး လာမယ်။ ဈေးတွေ ကြီးမားလာ မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မွေးမြူ ရေးအတွက်လည်း ထိခိုက်ပါတယ်””ဟု ပြောသည်။
ယခုနှစ် မိုးဦးကာလမှစတင် ၍ မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အပါအဝင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့ နယ်အများအပြားတွင် ရေကြီးရေ လျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဩဂုတ်လ ပထမပတ်အတွင်းရရှိထားသော စာရင်းအရ ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွမ်းခြံ ကုန်းမြို့နယ်တွင် ငါး၊ ပုစွန်ကန် ဧကပေါင်း ၁၀၄၄ ဧက၊ ကော့မှူး မြို့နယ်တွင် ၆၄ ဧက၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ ပဲခူးမြို့နယ်တွင် ၁၂၉၁ ဧက၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်တွင် ၃၅ ဧက၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဧက ၈၀ဝ ကျော် စုစုပေါင်း ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးဧကပေါင်း ၃၂၃၄ ဒသမ ၅၇ ဧက ရေလွှမ်းနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းမီဒီယာဥပဒေကို လက်ရှိလွှတ်တော် သက်တမ်းအတွင်း ပြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း MPC ဥက္က??